ဒီကနေ့ကျရောက်တဲ့ (၅) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကို မိခင်မပါပဲ ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ မီးမီးခဲရဲ့ သမီးလေး NARNIA ရဲ့ ဗီဒီယို ……. - Achawlaymyar
ဒီကနေ့ကျရောက်တဲ့ (၅) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကို မိခင်မပါပဲ ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ မီးမီးခဲရဲ့ သမီးလေး NARNIA ရဲ့ ဗီဒီယို …….
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မီးမီးခဲကတော့ သူမနေထိုင်ရာ သြစတေးလျနိုင်ငံ Sydney မြို့မှာပဲ ဆေးကုသမှုခံယူရင်း ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ မီးမီးခဲ ကွယ်လွန်သွားချိန်မှာတော့ သမီးကြီး ဖြူဖြူစင်စင်လင်းအပြင် ဒုတိယအိမ်ထောင်က သမီးကြီး Narnia နဲ့ သားငယ် Napolion တို့ ကျန်ရစ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မီးမီးခဲကတော့ မကွယ်လွန်ခင်အချိန်မှာ သားသမီးသုံးယောက်စလုံးကို မေတ္တာတွေအပြည့်နဲ့ စောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီး မိခင်တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက်နေ့ကတော့ မီးမီးခဲရဲ့ သမီးအလတ်လေး Narnia ရဲ့ မွေးနေ့လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Narnia က သူမရဲ့ မွေးနေ့မှာ မိခင်မရှိပဲ ဖြတ်သန်းနေရပေမယ့် ဖခင်ဖြစ်သူက အနားမှာရှိနေပြီး သမီးလေး မျက်နှာတစ်ချက် မပျက်ရအောင် အစစအရာရာ လိုလေသေးမရှိ ဖြည့်စည်းပေးနေတာကို အခုလိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။
Narnia အတွက်ကတော့ မိခင်ဆုံးပြီး နောက်တစ်နေ့က သူမရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်နေတာကြောင့် နောက်လာမယ့်နှစ်တွေမှာ မိခင်ကို ပိုပြီးတော့တောင် သတိရနေရှာမယ် ထင်ပါတယ်။
မီးမီးခဲလည်း ကောင်းရာဘုံဘဝကနေ သမီးလေးအတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးနေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
………နိုငျငံကြျော အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈတဲ့ မီးမီးခဲကတော့ သူမနထေိုငျရာ သွစတေးလနြိုငျငံ Sydney မွို့မှာပဲ ဆေးကုသမှုခံယူရငျး ဆုံးပါးသှားခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။ မီးမီးခဲ ကှယျလှနျသှားခြိနျမှာတော့ သမီးကွီး ဖွူဖွူစငျစငျလငျးအပွငျ ဒုတိယအိမျထောငျက သမီးကွီး Narnia နဲ့ သားငယျ Napolion တို့ ကနျြရဈခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မီးမီးခဲကတော့ မကှယျလှနျခငျအခြိနျမှာ သားသမီးသုံးယောကျစလုံးကို မတ်ေတာတှအေပွညျ့နဲ့ စောငျ့ရှောကျခဲ့ပွီး မိခငျတာဝနျကပြှေနျခဲ့သူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။
Narnia အတှကျကတော့ မိခငျဆုံးပွီး နောကျတဈနကေ့ သူမရဲ့ မှေးနဖွေ့ဈနတောကွောငျ့ နောကျလာမယျ့နှဈတှမှော မိခငျကို ပိုပွီးတော့တောငျ သတိရနရှောမယျ ထငျပါတယျ။
မီးမီးခဲလညျး ကောငျးရာဘုံဘဝကနေ သမီးလေးအတှကျ မှေးနဆေု့မှနျကောငျးတောငျးပေးနမေယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။